Caawa fiidkii waxan ka qeybgalay, kullan aaladda ZOOM-ka lagu qabtay oo ay ka soo qeybgaleen dad aad u farabadan, kulankan ayaan hadaan daacad hadlo wuxuu aniga ii ahaa kulan ZOOM lagu qabto kii ugu liitay, hadana ugu yaabka badnaa.
Bal qabsoo waxaan ka war helay jirataanka kulanka, markii aan ku arkay ogeysiis uu bartiisa facebook soo dhigay, musharaxa madaxweynaha Soomaaliya u taagan isla markaasna ahaa wasiirkii hore ee warfaafinta ee dowladda hadda xilligeedu dhamaaday balse sii heysa xukunka Daahir Geelle.
Waxaan u arkay in uu kulan muhiim ah yahay, misna dheelli-tiran, maadaama xubin ka tirsan mucaaradka Soomaaliya iyo Xubin ka tirsan dowladda sii fadhida xukunku ka qeybgalayaan.
Ogeysiiska aan arkay waxaa la socday, sawir iyo qoraal muujinaya goobta shirka, ka dhacaayo, numbbaradda looga qeybgalaayo, saacadda uu dhacaayo, cidda ka qeybgaleysa iyo weliba cidda dhexdhexaadineysa.
Kulanka oo lagu sheegay dood waxaa lagu casuumay Daahir Geelle, xubin u taagan xilka madaxweynenimada iyo Wasiirka warfaafinta ee dowladda fedraalka ah ee xilligeedu dhamaaday Cismaan Dubbe.
Saacad aan galabtii seexan jiray, waa baajiyey si aaeey dooddu ii dhaafin, waxaan sugaba waxaa la gaaray waqtigii ballanta, macluumaadkii shirka oo aan horey u sii diyaarsaday ayaan la kala baxay, oo aan qabadsiiyey laptop-keeyga markii saacadda dhankeyga wadanka UK ahayd 5:00 Pm hase yeeshee dhowr jeer ayaan geli waayey, ilaa laga gaaro 5:16-kii markaas oo uu ii furmay ZOOM-kii.
Durba waxan meesha ugu tagay dad badan oo wada buuqaaya, qalaadaaya, qeylinaaya, gacantuna u wada taagan tahay, waxaan is iri, malaha doodii waa kaa hormartay, oo xilligii su’aalaha ayaa la joogaaba, ee toloow ma waqtigaa kaa qaldamay? dib baan u hubiyey mise wax kasta waa ii saxan yihiin, waqtina igama qaldana.
Cabaar baan ku jiray oo indho-indheeyey, waxaan furay meesha WAX LAGU QORO EE CHAT-KA mise waxa caay ku qoran waad yaabtaa.
Caayda iyo ajaafadda meesha ku qoran waxay ku socotaabadankeedu Musharax Daahir Geelle, kalmadda foosho xun ee anshaxdarradu ku hagoogatay ee beryahaan aan arkaayey iyadoo dhallinyaro badani ku soo qoraayaan Facebook ee ah (SHUBBAA KU DHASHAY) ayaa aad ugu badneyd waxa meesha ku qoran.
Damiir kaa i siin waayey, in aan sii akhriyo chat-ka waana ka soo baxay, waxaanse isaga jiray shirkii, waxan ku fekeray, intaan oo dad ah sidee loo kala maamuli doonaa? waxey u muuqdeen dad la soo casuumay, ama iyaga isa soo casuumay sida aan anuguba kuhelay ku helay xogta dooda.
masuuliyiintii dooda ka qeybgaleysay ayaan ka dhex raadiyey dadka, waa arki waayey, laakiin 9 daqiiqo ka dib, gabadh dhexdhexaadineysay dooda ayaan arkay, hadalkeedana waa maqlay.
Shaashadeyda waxaad mooday in korontadu marna ku dameysay marka ku imaaneysay, oo kolba muuqaalku marna waa tagaayey marka waa imaanaayey, qadkeygii internetka ee guriga ayaan aamusnaan ku canaantay, anoo eedda hilaaca i hor mar-maraaya dusha ka saaray, wax yar ka dibna qadkaan badashay oo ku xirtay, mid marmarka aan muuqaalada tooska ah baahinaayo aan adeegsado oo ii gaar ah, kan gurigana ka xoog badan, intaa wixii ka dambeeyey waxaa iga baxay, shakigii ahaa in qadkeygu liito.
Laakiin maxaa dhacay? Daahir oo nala joogay ayaa soo dhoweyn ka dib su’aal lagu bilaabay, balse Cismaan Dubbena waa la sheegay magaciisa, waxaana laga codsaday in uu isaguna salaanta uun qaado si loo ogaado in uu joogo, mase maqlin wasiirka, markaas waxey gabadhii dooda daadihineysay Daahir siiso fursad uu dadka ku salaamo, wuuna salaamay, ka dib waxeey weydiisay: maxaa keenay in doorashadu dib u dhacdo? halka dulucda doodu ahayd: SIDEE XAL LOOGU HELI KARAA, XAALADDA CAKIRAN EE DALKU GALAY?
Daahir wuxuu guda galay hadalkii, wuxuuna yiri wixii uu kaga jawaabaayey su’aasha la weydiiyey, hadalkiisa si deggan ayuu u dhiibtay, wuxuu ku nuuxnuusaday ka mucaarad ahaan sideey u arkaan, sababta wuxuu ku timaamay in madaxweynaha iyo dowlada waqtigu ak dhamaaday, ay had iyo jeer caqabadba ku tale ku biiriso, laakiin 10 daqiiqo oo kasta waxaa lumaayey codkiisa, mana aanaan maqli karin, 3 jeer oo mid 10 ilaa 7 daqiiqo u dhaxeyso ayaan waayey codka Daahir Geelle, ka dibna qadkii baa nalaga tuuray gebigeenaba, waxeyse gabadhii daadihineysay markaan soo noqonay noo sheegtay in HACKERS soo weerareen shirka oo qadkaba ka saareen, waa isaga qancay taas, oo waa dareemay in meesha wax weyni dhaceen, hadana waxan is weeydiiyey, HACKERS-KU ma banggi baa meesha yaal oo ay jabsanayaan?
Yeelkeede, markuu iga go’aba ama aan ka tuurmaba waa ku noqonaayey, waxaase intaas dhex socotay:
FOWDO, BUUQ, (Marka dadka MUUDKA laga qaado), codka oo go’go’aayey, codka oo gebi ahaanba lumaayey, dad u muuqda in aaneey doodo iyo shir toona u imaan dhageysigeeda balse qas u yimid. Yaab baa i hareeyey, waayoo waxaa isu keey qaban weyday, shirka aan u arkay muhiim iyo fowdada meesha ka taagan.
Weey soo socotay ee intaan sugaayey in Wasiirk Cismaan Dubbe uu la doodi doono musharax Daahir Geelle, uun baan ka war helay iyadoo gabadhii leedahay: Mudane Daahir waad mahadsan tahay ka soo qeybgalkaaga, ee yaa su’aalo qaba? mise suaalahi dhowr qof oo badankoodna la waayey ayaa loogu yeray, iyo dadka oo u badnaa dad la bar garanaayey.
Intaa ka dib Daahir wuxuu sheegay in uu cafiyey dadkii soo caayey ee fowdada ku kiciyey, wuxuu sheegay in kuligood ay ilmihiisa yihiin waxbana loo raacan, wuxuuna codsaday in eey bartaan intaaneey la dagaalin.
Ka bacdi gabdhii ayaa u yeertay wasiir Cismaan Dubbe, in uu bal hadduu joogo hadlo soona dhowaado, dhowr jeer markeey u yeertay, wasiirkiina hadalkiisii la waayey, ayuu Daahir is Gartay (Waa sidaan u fahmaye) wuxuuna gabadhii ka codsaday, haddii aneey su’aalo u dhineyn in la fasaxo oo rabo wasiirka in uu booska u baneeyo, si howshu u sii socoto.
Aniga halkaas ayaan kaga quustay in wuxuu aneey ahayn DOODO oo uu yahay SHIR iyo dhowr su’aalood bes.
Anigoo xogaa la yaaban dooda naloo ballamiyey oo shir iyo hadal caadi ah iyo su’aalo uuisu badashay, dad doodaayana aneey jirin, uun baa gabadhii ku noqotay baafintii wasiirka, WAASIIR DUBBE HADDUU NA MAQLAAYO FADLAN SOO DHOWOOW! QOLYAHA MAAMULKA FADLAN WASIIRKA MUTEKA KA QAADA, intaas oo dhowr jeer ay ku celcelisay gabadhii ayuu mar dambe shaashadDA ka soo muuqday, Wasiirka Warfaafinta ee dowladda federaalka ah ee Cismaan Dubbe, laakiin weli waxaa jirtay cillad dhanka codka ah,17 daqiiqo markii laga joogo xilligii baafiska lagu bilaabay, ayaanu maqalnay wasiirka hadalkiisii.
Gabadhii ayaa soo dhoweysay, saa waaba kan yiri magaceyga waad qaladay, si kaftan ahna u raaciyey, hadaad mar dambe magaceyga qalado waanu is dileynaa.
Intaa ka dib waxeey gabadhii ku wargelisay in eey siisay 2 daqiiqo oo furitaan ah, saa waaba kan diiday, oo yiri dulucdaanu u galleynaa, su’aalna maba sugine isagii baaba isu meeriyey su’aashii, SIDEE XAL LOOGU HELI KARAA XAALADDA CAKIRAN EE DALKU MARAYO SOO MAAHEYN? intii yiri ayuu hadalkiina horey u galay, Hagaag waxaa weeyey………
Sidii qudbad uu soo diyaarsaday ayuu dabada u qabtay, mar eed buu dusha kala dhacay mucaaradka iyo banaanbaxayaasha, wuxuu ku nuuxnuuxsaday in dalka dimiqoraadiyadda ka jirta aaneey aduunka kala barkiis ka jirin, wuxuu mar usha la koray Imaaraadka oo uu sheegay in eey mucaaradka is xambaarsan yihiin ,mar kale wuxuu geeska suray Generaal Indha Cadde wuxuu cadeeyey oo ku nuuxnuuxsaday in hadalkiisa la dhibsaday (Dowladu dhibsatay) in kastoo aanuu toos u oran, mar wuxuu qiil u raadiyey in dadka banaanbaxyada laga joojiyo ay sax tahay, mar wuxuu ku faanay in dowladu wax kasta isku dayday si doorasho qof iyo cod ah loo qabto, wuxuu tiro ka sadex jeer sii socod nagu geeyey , soo socodna loogu soo celshay Dhuusa-Mareeb oo isagu uu ugu yeeray Magacii dhowrka dhinac u macneysmaayey ee SAMA-REEB.
Inta wasiirku hadlaayey qadku hal mar buu go’ay waase soo noqday, dareenkeygu dhowr jeer ayuu is badalay, mar waan yaabaa, mar waan qoslaa, marna waaba baqaa, siiba markuu yiri: Wariyayaal baa xagga iyo xagga u ardaya oo waxeey rabaan iska soo qorqoraya, tv kasta ayaa wareysiyo lagu qaadaa, dowladuna waxba ma tiraahdo.
Intaas su’aalo ayaan maskaxda ka diyaarsadaa, qaarna si kooban ayaan wax aan ku xasuusto u qortaa, hadana intii hadalka wado, uun baan iska daadiyaa su’aalihii hore, anoo ay ila tahay in aan waqti u heli doono aan wax ku weydiiyo, ugu dambeyntii, gabadhii dhexdhexaadineysay shirka ayaa su’aal ay dhici karto in la soo diyaariyey weydiisay:
19-kii Febraayo, maxaa dhacay?
Wasiir Dubbe ayaa ku jawaabay, 19-kii Febraayo waxaa dhacay isku day af-gembi. waxey socotaba, kolba gacantaan taagaa, tiiyoo digital ah iyo iyadoo run ah oo shantii farood leh, kolba qof baa la siiyaa, weliba dad u badan masuuliyiin hore wasiiro hore, guddoomiyaha gudigii dorashada Xaliima yareey oo markii loo yeeray ay gabdhina ugu yeertay guddoomiyihii hore ee Guddiga Doorashada, Wasiir Cismaana la soo booday WELI WAA VAILID! oo iyaduna soo jeedin, soo jeedisay laakiin aan su’aal weydiin, dhowr qof oo koleey la bargaraanayo, ayaa fursad la siiyey, wax saxaafad ah fursad lama siin, haddii la siiyeyna anigu uma garan, balse anigoon weli rajo dhigin, uun buu wasiirkii hadlay:
EEN WAAN IDINKA SII TAGAYAA, HOWL BADAN BAA JIRTA, CORONAVIRUS BA’AN BAA JIRA, OKSAJIIN LA’AAN BAA JIRTA, MARKA SHAQO BADAN BAA II TAALLA WAAN TAGAYAA!
Halkaas ayeey ku soo afjarantay rajadii aan ka lahayn aniga iyo dad badan oo gacnuhu u taagnaayeeyn, in aan fursad u helno in aan wasiirka warfaafinta su’aal ku weydiiyo.
Su’aalihii ii diyaarsanaa, kuwii iigu muhiimsanaa waxaa ka mid ahayd:
WASIIR DOWLADDA AAD WASIIRKA KA TAHAY NIDAAMKEE KU DHAQANTAA?
dimoqraadi, dictatooriyad, hantiwadaag, hantigoosi?
Maadaama uu aad ugu nuuxnuuqsaday intuu hadlaayey wasiirku, in dimoqraadiyad aad u wanaagsan wadanka ka jirto, waxan u raacin lahaa:
MUDANE WASIIR, NIDAAMKA DIMOQRAADIGA AH EE AAD NOO SHEEGTAY IN UU DALKA KA JIRO , MA KAN INTUU JOOGAY MUSHARAX DAAHIR GEELLE ADIGU AAD LA MAQNAATAA, MARKUU BAXAYNA AAD LA TIMID SHIRKA OO AAD HALKAAN NOOGU QUUS GOOYSEEN DOODII AAD NOOGU YEERTEEN?
Ugu dambeyntii qolada shirka qabtay:
Weey dadaalkeen waana ku bogaadinayaa, waxaanse u soo jeedinayaa, in hadda ka dib aneey doodaha u bedelin shir iyo qudbado, in aneey casumadda furin oo ay dad kooban oo is maqli kara, fowadana wadin ku casuumaan hase yeeshee ay bartooda facebook saaraan si dadka intiisa kale u dhageystaan.
In ay yeeshaan qof dooda daadihiya, iyo qof maamulka guud oo kale la socda ama ka baddala qeybinta hadalka qofka hore, si gabadhii caawa howsha waday oo kale aneey ugu dhibtoon meesha qof qur ahi.
In aneey ka been sheegin daadihinta howsha, waayoo caawa waxaa dhacda, in su’aalo la weydiiyey wasiirka laguna sheegay in qeybta chatka lagu soo qoray su’aalahaas, halka qeybta chatkuna uu xirnaa oo laba mamnuucay in wax lagu qoro, saacad ka hor inta anuu wasiirku imaan.
Arrimaha noocaas ah heyadda uma qurux badana.
Previous 10 qof ayaa lagu midiyeeyey koofurta London
Next Coronavirus Brazilian variant oo lix qof laga helay UK
2 thoughts on “Fowduu ku bilowday, farsama-xumaa ugu darsantay, fajacna waa ku dhamaaday.”
February 22, 2021 at 22:21
Waxadba moodaa inan is ogayn. 3 saacadood ka hor anoo Dubbe ka quustay inuu soo gali doono khadka ayan ka baxay oo FB kuso qoray waqtigii iigaga lumay.
Waxa kaliya aan ka faa’day intii yarayd aan ku jiray ayaa ah inaan bartay dadnimada Dahir Gelle!
A Abdule says:
Saxafiyad aan KU faano AYAA TAHAY